လူသားတွေရဲ့ ရက်စက်မှုဒါဏ်ကို သေမတတ် ခံစားနေရတဲ့ လိပ်ကလေး ..! - APANNPYAY
/ လူသားတွေရဲ့ ရက်စက်မှုဒါဏ်ကို သေမတတ် ခံစားနေရတဲ့ လိပ်ကလေး ..!
လူသားတွေရဲ့ ရက်စက်မှုဒါဏ်ကို သေမတတ် ခံစားနေရတဲ့ လိပ်ကလေး ..!
ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကို ညစ်ညမ်းအောင်ပြုလုပ်ကြသူများမှာ လူသားတွေပင်ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတို့ရဲ့ ဆိုးကြိုးတွေကို အဓိက ခံနေရကြတာတော့ ရေသတ္တ၀ါတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပစ်ချတဲ့အမှိုက်တွေထဲမှာ ပလတ်စတစ်တွေဟာ အဆိုးဆုံး လို့ပြောလို့ရပါတယ်။
အခုလည်း ရေသတ္တ၀ါလေ့လာရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာ သနားစဖွယ်လိပ်ကလေးတစ်ကောင်ကို
ကော်စကာရီကာ ကျွန်းအနီး မှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ သနားဖို့ကောင်းတာကတော့ ပလတ်စတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းဟာ လိပ်ရဲ့ နှာခေါင်းမှာ ဆို့နေ တာပါ။ ဘယ်လိုမှ ဖယ်ထုတ်လို့ မရတာကြောင့် လိပ်ကလေးမှာ အတော်ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်။ ဒါကို လေ့လာရေး အဖွဲ့ဝင်တွေက ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရာမှာ ပလတ်စတစ်ချောင်းဟာ အတော်နက်နက် စိုက်ဝင်နေတာကြောင့် ဖယ်ရှား ဖို့ အလွန်ခက်ခဲ ခဲ့သလို လိပ်ကလေးမှာလည်း နာကျင်လွန်းတာကြောင့် ရုန်းကန်အော်ဟစ်နေတာကို ဗီဒီယိုမှာမြင်နိုင်ပါတယ်။ အလွန်သနားဖို့ကောင်းလှပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ပလတ်စတစ်ကော်ချောင်းကို ဖယ်ထုတ်နိုင် ခဲ့ပြီး ၆ လက်မခန့် အရှည်ရှိတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ဖယ်ထုတ်ချိန် ၈ မိနစ်အတွင်းမှာ လိပ်ကလေးအတွက်တော့ ငရဲကျနေသလို ခံစားရမှာသေချာပါတယ်။
ပငျလယျသမုဒ်ဒရာကို ညဈညမျးအောငျပွုလုပျကွသူမြားမှာ လူသားတှပေငျဖွဈပါတယျ။ လူသားတို့ရဲ့ ဆိုးကွိုးတှကေို အဓိက ခံနရေကွတာတော့ ရသေတ်တဝါတှဖွေဈပါတယျ။ ပဈခတြဲ့အမှိုကျတှထေဲမှာ ပလတျစတဈတှဟော အဆိုးဆုံး လို့ပွောလို့ရပါတယျ။
အခုလညျး ရသေတ်တဝါလလေ့ာရေးအဖှဲ့တဈဖှဲ့ဟာ သနားစဖှယျလိပျကလေးတဈကောငျကို
ကျောစကာရီကာ ကြှနျးအနီး မှာတှရှေိ့ခဲ့ရပါတယျ။ သနားဖို့ကောငျးတာကတော့ ပလတျစတဈခြောငျးတဈခြောငျးဟာ လိပျရဲ့ နှာခေါငျးမှာ ဆို့နေ တာပါ။ ဘယျလိုမှ ဖယျထုတျလို့ မရတာကွောငျ့ လိပျကလေးမှာ အတျောဒုက်ခရောကျနပေါတယျ။ ဒါကို လလေ့ာရေး အဖှဲ့ဝငျတှကေ ဖယျရှားဖို့ကွိုးစားရာမှာ ပလတျစတဈခြောငျးဟာ အတျောနကျနကျ စိုကျဝငျနတောကွောငျ့ ဖယျရှား ဖို့ အလှနျခကျခဲ ခဲ့သလို လိပျကလေးမှာလညျး နာကငျြလှနျးတာကွောငျ့ ရုနျးကနျအျောဟဈနတောကို ဗီဒီယိုမှာမွငျနိုငျပါတယျ။ အလှနျသနားဖို့ကောငျးလှပါတယျ။ နောကျဆုံးမှာတော့ ပလတျစတဈကျောခြောငျးကို ဖယျထုတျနိုငျ ခဲ့ပွီး ၆ လကျမခနျ့ အရှညျရှိတာကို တှလေို့ကျရပါတယျ။
ဖယျထုတျခြိနျ ၈ မိနဈအတှငျးမှာ လိပျကလေးအတှကျတော့ ငရဲကနြသေလို ခံစားရမှာသခြောပါတယျ။